८ वर्ष अगाडीको त्यो घटना: जसले छताछुल्ल पार्यो ‘सुन्दरी प्रतियोगिता’को नाममा हुने यौनहिंसा ! - Meronews
प्रहरी भन्छ-‘पीडितलाई सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौं’
मेरोन्यूज २०७९ जेठ ५ गते १८:२१
०७१ सालमा रस्मिका (नाम परिवर्तन) १६ वर्षकी थिइन् । १२ कक्षाको परीक्षा सकिएपछि ‘ब्युटि प्याजेन्ट’ मा सहभागी भइन् । उनले अडिसन दिइन् । तर, अडिसनबाट उनी छनोटमा पर्न सकिनन् । छनोटमा नपरे पनि त्यहाँ भएका तस्बिरहरू बाहिर आएपछि कुनै व्यक्तिबाट उनलाई म्यासेज आयो – ‘तिमी आउ फोटोसूट गरौं, अनि मोडल बनाउँछौं ।’
त्यो म्यासेज आएपछि उनी निकै उत्साहित बनिन् । ‘ब्युटि प्याजेन्ट’ मा पराजित भएको पनि उनले विर्सिइन् । उक्त म्यासेज पठाउने व्यक्ति थिए एक फोटो पत्रकार ।
रस्मिकाको मोबाईलमा म्यासेज पठाउने फोटो पत्रकार र एक कन्सल्टेन्सी सञ्चालकले तस्बिर खिचेपछि उनलाई पाँच हजार पैसा दिए । फोटो खिचेपछि उनीहरूले भने कि हामीले ‘ब्युटी प्याजेन्ट’ आयोजना गर्दैछौं । फोटो पत्रकार र कन्सल्टेन्सी सञ्चालकको त्यो कुरा सुन्नासाथ रस्मिकाले ‘ब्युटी प्याजेन्ट’मा सहभागी हुने समर्थन जनाईन् । रस्मिकाले त्यो भन्दा पहिले पनि ‘ब्युटी प्याजेन्ट’मा भाग लिइसकेकी थिएँ । त्यसैले उनि राजी भईन् ।
ब्युटी प्याजेन्ट सकियो र उनि विनर भईन् । विनर भइसकेपछि उनलाई ‘सक्सेस पार्टी’ दिने भनियो र सोही अनुरुप रस्मिका तयार भइन् । एभरेष्ट होटलमा पार्टी आयोजना गरेको भनियो । उनी त्यहाँ गइन् । जबकि त्यहाँ कोही पनि थिएनन् । रस्मिकाले प्रश्न गरिन्, – खै त अरू मानिसहरू ?
उनलाई बोलाएका व्यक्तिले भने, ‘तिमी चाँडै आयौ । अरू विस्तारै आउँछन् । राति ६/७ बजेतिरबाट पार्टी सुरू हुन्छ । तिमी बस्दै गर ।’
उनि बस्न थालेको केही समयपछि वेटर आएर लेमन जुस दिए । ति वेटरले भने–‘यो वेलकम ट्रिट हो ।’ त्यसपछि उनले त्यो खाईन् । खाएको झण्डै १० मिनेटपछि उनी आफुलाई अनकन्सियस महसुस गर्न थालिन् । त्यसपछि उनले ति कन्सल्टेन्सी सञ्चालकलाई भनिन्– ‘मलाई गाह्रो भयो, म घर जान चाहन्छु ।’
ति कन्सल्टेन्सी सञ्चालकले उनलाई उल्टै गाली गरे, ‘तिमी विनर भएर यस्तो गर्ने ? तिम्रोबारे अरूले के सोच्लान् ?’ ति कन्सल्टेन्सी सञ्चालकले भने, ‘यस्तै हुन्छ, केटीहरूलाई गाह्रो भयो भने रेष्ट गर्नलाई भनेर रूम लिएर राखेको छु, तिमी त्यहाँ गएर एकछिन रेष्ट गर । सबैजना आएपछि म तिमीलाई बोलाउँछु’ । त्यसपछि उनी रूममा रेष्ट गर्न गइन् ।
कोठामा रेष्ट गर्दा उनि पुरै होसमा थिइनन्। जति बेला होसमा आयो त्यतिबेला लाग्यो कोहीले उनका शरिरका अंग चलाइरहेका छन् । उनीमाथि कोही प्रयोग भइरहेको छ । जब उनी होसमा आइन् । त्यो बेला उनी पुरै नाङ्गै थिइन् । उनीसँगै त्यो एब्युजर पनि उनीसँगै पुरै नाङ्गै सुतिरहेको थियो । पुरै ओछ्यानभर रगत थियो । त्यसपछि उनी छाँगाबाट खसेझैँ भइन् । एकदमै ठूलो स्वरमा कराइन् । तर उनको स्वर सुन्ने कोही भएनन् ।
त्यसपछि ति कन्सल्टेन्सी सञ्चालकले रेस्मिकाको ब्यागमा २० हजार रुपैया पैसा हालिदिए र भने, ‘तिम्रो ब्यागमा २० हजार हालिदिएको छु । घटनाबारे कोहीलाई पनि केही भन्यो भने तिम्रो नाङ्गो फोटो र भिडियो मेरो मोबाइलमा छ, सार्वजनिक गरिदिन्छु, मेरो साथी चर्चित फोटोग्राफर छ ।’
त्यति भनिसकेपछि उनको बोली रोकियो । निकै तनावपूर्ण अवस्थामा उनी त्यहाँबाट घरतिर लागिन् । त्यसपछि उनले ब्याल्कमेलिङ गरेर पटक पटक बलात्कार गरिरह्यो । कति पटक त उनले आत्महत्या गर्नेबारे पनि सोचिन् । तर, सकिनन् ।
‘मैले त्यो बेला सबै कुराहरू भनेँ । मलाई गरेको फोन रेकर्ड, मलाई गरेको म्यासेज सबै देखाइदिएँ । मेरो ब्वाईफ्रेण्डले त्यो मान्छेलाई धेरै पिट्यो,’ रस्मिकाले भिडियोमा भनेकी छिन् ।
समय बित्दै गयो । घटनापछिका यतिका समय निकै कष्टपूर्ण र मानसिक तनावबाटै बित्यो । घटनाबारे उनले धेरैलाई भनिन् । तर, कतैबाट पनि सहयोग मिलेन । झन उल्टै ‘तिमी नै त्यस्ति हौं’ भन्ने जवाफ मिल्थ्यो । यतिसम्म कि आफुमाथि बलात्कार गर्नेकी श्रीमतीलाई पनि भनिन् । उनको श्रीमतीले रूखो जवाफ फर्काइन् । ‘हैन जम्मै केटीहरू मेरै बुढोको पछि किन लाग्छन् ?’
सुन्दा यो घटना कुनै रचित कथा वा चलचित्रको पटकथा जस्तो लाग्छ तर यो कुनै कथा वा बनिबनाउ घटना होईन । यो यथार्थ घटना हो जुन पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चाको विषय बनेको छ । यो घटना एउटा महिलाले सार्वजनिक गरेको घटना हो । घटनामा २००२ कि मिस नेपाल माल्भिका सुभ्भाको नाम जोडिएको हुनाले समेत यो घटना निकै उत्कर्षमा पुगेको छ ।
बुधबार ‘सुसी खान जाने हो’ टिकटक एकाउटबाट एक युवतीले आफु बलात्कारको सिकार भएको जानकारी दिइन् । २-२ मिनेटका २० वटा भिडियोमा उनले कहिले रु कसरी रु बलात्कृत भइन् त्योबारे जानकारी दिएकी छन् । आफू बलात्कृत भएकोबारे उनले पूर्व मिस नेपाल माल्भिका सुब्बालाई समेत जानकारी दिएको बताएकी छन् । तर, उनले उल्टै भनिदिएछन्, ‘ग्ल्यामरस क्षेत्रमा यो त नर्मल हो ।’
उनी ६/७ वर्षको हुँदा फिल्ममा अभिनय गरेकी थिइन् । त्यही बेलादेखि उनको सपना थियो- ठूलो भएपछि मोडल हुन्छु, कलाकार हुन्छु । तर, उनको सपना त्यही घटनाले तुहाइदियो । उक्त घटनापछि उनी डिप्रेशनको सिकार बनिन् । अहिलेसम्म पनि उनी उपचार गराइरहेकी छिन् । उनलाई आफुमाथि भएको बलात्कारबारे बोल्न यतिका वर्ष लाग्यो । धेरैले उनीमाथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन् । अहिले पनि केटी नै त्यस्ति हो भन्दै उनीमाथि प्रश्न समाजले उठाईरहेको छ ।
‘त्यो समय मलाई यस्तो भयो भने के गर्ने ? कहाँ गएर उजुरी गर्ने ? थाहा थिएन । अहिले पो थाहा पाएँ । अनि घटना सार्वजनिक गरेकी हुँ,’ रस्मिकाले भिडियोमा भनेकी छिन्, ‘कुनै पनि केटीहरू आफ्नो आमालाई नलगी कहिँ पनि नजानु । यो मेरो अनुरोध मात्र होइन्, बिन्ती पनि हो ।’
माल्भिका सुब्बाले मागिन् माफी
पीडितले हालै घटनाबारे भिडियो बयान सार्वजनिक गरेपछि सुब्बाले उनलाई म्यासेज गर्दै त्यतिबेला आफू नाबालिग करणी, बालयौन दुर्व्यवहार र सहमतिको सम्बन्धबारेका कानुनबारे पूर्ण जानकार नभएको बताएकी छन् । उनले हालै एक सन्देश सार्वजनिक गर्दै हिंसाका यस्ता घटनामा मौन बस्नु कुनैबेला झनै हानिकारक हुने आफूले सिकेको बताउँदै भनेकी छन्, ‘अब म मौन बस्ने छैन, उनी र उनी जस्तै अन्य अरु धेरै पीडितका लागि म लड्नेछु ।’ सुब्बाले आफूले पीडितलाई सहयोग गर्न नपाएकोप्रति माफी पनि मागेकी छन् र आफू अझै पनि धेरै कुरा सिकिरहेको बताएकी छन् ।